Tababaraha Barca Oo Ka Waramay Hadii Ay Real Ku Iibsan Karto Neymar Aduun Dhan 400 Milyan %
Tababaraha Barca Oo Ka Waramay Hadii Ay Real Ku Iibsan Karto Neymar Aduun Dhan 400 Milyan
Tababaraha kooxda kubada cagta Barcelona, ninka lagu magacaabo Ernesto Valverde, kaasoo warbaahinta la hadlay ka hor ciyaartii ay 2-0 uga soo badiyeen Malaga, ayaa wuxuu ka hadlay warar xanta ah ee ku saabsan Neymar iyo Real Madrid.
Valverde, ayaa wuxuu si gaar ah uga faalooday sheekada ku aadan in Los Blancos, ay diyaarineyso dalab dhan 400 Milyan, kaasoo ay kusoo xiro geliso laacibkii hore ee naadiga cadowtooyada ay kala dhaxeyso ee Bluagrana.
Neymar, ayaa wuxuu hada yahay mi dhaawac ah, isagoona garoomada ka maqnaan doona inta ka dhiman xagaagan, laakiin Valverde, wuxuu hoos udhigay warbixinada ku aadan in Madrid, ay ciyaaryahankaan reer Brazil, lacagtaas kasoo bixin karto.
“Aniga ma ahi mid wax fikrad ah ka qaba arrintaas,” ayuu ku jawaabay mar la weydiiyay hadii kooxda caasimada Spain, ka dhisan ay 400 Milyan kusoo afduuban karto, xidiga hadda ah, midka koowaad ee dunida ugu qaalisan.
Hogaamiyaha kooxda kaalinta koowaad kaga jirta shaxda kala horeynta ee La La Liga, ayaa wuxuu hadalkiisa intaas ku daray: “Laakiin, kiiskaan wuxuu yahay mid aanan aniga ka talo bixin karin ama xitaa aan ku lahayn wax dookh ah.
Neymar, ayaa wuxuu Barcelona, kaga biiray fasal ciyaareedkii hore dhigeeda PSG, markaasoo lagu iibsaday aduun lacageed dhan 222 Milyan, taasoo ka dhigtay ciyaaryahankii ugu horeeyay ee aduun lacageed intaas la eg lagu iibsado.